Typesdị ahia nke 7 nke kachasị jiri na eCommerce | ECommerce ozi ọma
Abia na ahia ahia, odighi otu uzo. Dabere na ebumnuche ị na-edo onwe gị, e nwere ụdị azịza ahịa dị iche iche na ịmara ụfọdụ n'ime ha nwere ike inyere gị aka mezie ihe ị ga-emerịrị iji mezuo ebumnuche ahụ ị na-achọ.
Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịma ihe atụmatụ ịzụ ahịa yana ụdị usoro ahịa ahịa dị adị na ha na-ahụkarị iji, ebe anyị na-ahapụ gị ọdịnaya niile ka ị ghọta ihe anyị bu n'uche na ihe onye ọ bụla n'ime ha na-arụ ọrụ.
2 Strategiesdị usoro ahịa dị adị
2.1 Atụmatụ nkewa
2.2 Atụmatụ asọmpi asọmpi
2.3 Atụmatụ usoro
2.4 Digital ahịa atụmatụ
2.5 Atụmatụ ahịa ọdịnaya
2.6 Usoro iguzosi ike n'ihe, otu n'ime ụdị usoro ịzụ ahịa kachasị dị ala
2.7 Ikike nnọchianya azum, nke ugbu a ụdị ahịa azum
Anyị nwere ike ịkọwapụta atụmatụ azụmaahịa dịka usoro nke ụlọ ọrụ na-eji akụ ya iji mezuo ebumnuche e setịpụrụ, nke na-abụkarị ịbawanye ahịa ma ọ bụ ịnwa ịpụ na asọmpi ahụ. Ndị ọzọ okwu, ha na- omume nke azụmahịa mere iji nweta nzube metụtara mmelite na nsonaazụ ya. Iji mee nke a, ebumnuche ha ga-enwerịrị ga-emerịrị usoro nke njirimara:
Na ha doro anya, ya bụ, na ha na-ezo aka na otu ihe ị chọrọ iji nweta.
Enwere ike ịlele, na enwere ngwaọrụ iji mara ma ebumnobi ahụ.
Na ha ga-emezu, ebe ọ bụ na ịchọrọ ebumnobi nke a ga-arụzu.
Dị mkpa, na ọ ga-emetụta ụlọ ọrụ.
N'ime usoro ahia ahia, ọ na-eme ihe na ogidi anọ isi nke ụlọ ọrụ:
Ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ, ya bụ, ihe anyị na-ere ma ọ bụ nye ndị ahịa.
Nkwalite, ma ha bụ ego, onyinye, wdg.
Isi nke ire ma ọ bụ nkesa. Channelszọ ahịa dị iche iche ga-abanyekwa ebe a, ma nke anụ ahụ ma n'ịntanetị.
Strategiesdị usoro ahịa dị adị
Ugbu a ị matara nke ọma ntakịrị ihe ahịa azụmaahịa bụ, ọ dị mma ka ị mara na e nwere ụdị ahịa dị iche iche ebe ọ bụ na, ọ bụrụ na ị maara ha, ị ga-enwe ike ịmata nke kachasị dabara na ya ebumnuche ị na-atụle imezu.
Enwere ụdị dị iche iche, mana ndị kachasịkarị bụ ndị a:
Ọ ghọrọ ezigbo ama ama afọ ole na ole gara aga, nke bụ eziokwu bụ na o nwere ihe kpatara ya. Ọtụtụ nwere ike ịdenye aha na ibe, mana onye ọ bụla ga-esonye n'otu otu dabere na afọ ha, ihe omume mmasi, ihe masịrị ha ... Ọ bụrụ na ị mezuo atụmatụ ahịa na-efu onye ahịa ahụ, ọ gaghị arụ ọrụ. Ya mere, usoro nkewa sitere na kewaa ndị na-ege gị ntị ị nwere n'ime obere ìgwè nwere ọdịmma, afọ, wdg. nkịtị.
Dịka ọmụmaatụ, were ya na ị nwere ụlọ ahịa ihe eji egwuri egwu n'ịntanetị. Have nwere ọtụtụ ndị debanyere aha, mana ụfọdụ nwere ụmụaka na ndị ọzọ na-enweghị ha (ha bụ ndị nchịkọta karịa). Yabụ nkwalite ebe ị na-ewepu ego maka nwatakịrị ọ bụla, maka otu nke abụọ a agaghị arụ ọrụ. You ga-atụfu ndị ahịa na nke a.
Atụmatụ asọmpi asọmpi
N'okwu a, na Akụkụ asọmpi bụ nke na-achịkwa ụdị omume a ga-eme. Iji mee nke a, anyị na-anwa imeziwanye dabere na asọmpi ahụ iji nyekwuo, ma ọ bụ dị ọnụ ala n'ihu ha na ebumnuche ịrịgo ọnọdụ.
Ogo ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ ị na-enye, ọnụahịa, nlebara anya, ma ọ bụ nnweta ngwaahịa a bụ akụkụ ụfọdụ nke asọmpi a nwere ike imetụta. Na-echefughi mgbasa ozi ma melite ọdịdị nke ụlọ ọrụ.
Nke a bụ ihe ikpeazụ anyị gwara gị maka tupu, ya bụ, ime ejiri mara ndị ika ahụ nke ọma. N'okwu a, n'onwe ya ọ bụ atụmatụ a ga-elebara anya iji melite ahịa na ụzọ ndị ọrụ, ndị ahịa ma ọ bụ na ọ bụghị, lee gị.
Digital ahịa atụmatụ
N'ime ahia dijitalụ anyị nwere ike ịgụnye ụdị dị iche iche nke ịzụ ahịa ahịa, ma ha niile dabere na Internetntanetị. N'okwu a, anyị nwere ike ịkọtara gị:
Inbound marketing, nke ga-abụ ịdọrọ ndị ọrụ ma gbanwee ha n'ime ndị ahịa, na-eji ọdịnaya bara uru.
E-mail, n'echiche na ọ na-achọ ịmalite nkwurịta okwu na ndị ọrụ ahụ. You ga-akpachara anya, n'ihi na ọ bụrụ na ị malite na mberede iji data ahụ na-enweghị onye ọzọ nyere gị ikike, mgbe ahụ enwere ike iwere ya dị ka mbubata, na mgbakwunye na iji data maka ihe a na-enyebeghị ikike.
Mgbasa mgbasa ozi. Na-arịwanye elu eji na ụdị ọzọ nke nkwukọrịta na ndị ọrụ.
Nchọgharị ọchụchọ, kpọmkwem nhazi weebụ, nke mere na ibe ma ọ bụ eCommerce dị na ọkwa kachasị elu ma pụtawanye.
Atụmatụ ahịa ọdịnaya
A hụrụ atụmatụ azụmaahịa ọdịnaya tupu ihe dị n'ime ahịa ahịa dijitalụ. Ma o nweela nnukwu mkpa na nnukwu ugwu na-ahụ ya ugbu a dị ka ihe dị iche.
Ọ dabeere na iji ihe onwunwe iji jikwaa imeziwanye ọnọdụ gị na aha nke ika site na ederede. Maka nke a, blog, infographics, ebook ... dị ezigbo mkpa ma ha jikwaa ijikọ ndị mmadụ.
Ugbu a, agbanyeghị na ị nwere ike iche na onye ọ bụla nwere ike ide, eziokwu bụ na ọ bụ naanị ndị maara ka esi "nwe" okwu ga-enwe ike ide ederede nke nwere ọmịiko na ndị ọrụ.
Usoro iguzosi ike n'ihe, otu n'ime ụdị usoro ịzụ ahịa kachasị dị ala
Ruo oge ụfọdụ, a hụla otú o si bụrụ ihe dị mkpa ma ọ bụ karịa ka ọ dị mkpa ilekọta ndị ahịa, ọ bụghị naanị ịhapụpụ ya ozugbo e nyefere iwu ahụ. A na-akpọ ya iguzosi ike n'ihe, ọ gụnyere aa ntị na nzaghachi gị, kamakwa iji nye gị nkwalite, ego, kaadị akwụmụgwọ, wdg.
N'aka ozo, obu ahia ndi ahia karia nke nmekorita nke neme na ahia.
Ikike nnọchianya azum, nke ugbu a ụdị ahịa azum
Nke a bụ otu n’ime ndị ikpeazụ pụtara ihe na ọ na-akpata mmetụ n’ihi na, n’otu ụzọ, ị na-atụgharị onye ahịa ma ọ bụ onye ọrụ ka ọ bụrụ onye nnọchi anya ụdị dị ka ha ga-esi kwalite ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ gị iji gbanwere ọrụ ka mma, ọnụahịa, onyinye, ma ọ bụ ọbụna ụgwọ ọrụ ego.
Nke a ga - enyere gị aka ịgakwuru ọtụtụ mmadụ, ebe ị gụnyere ndị na - eso ụzọ onye ahụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere ọtụtụ ịhọrọ site na, ndị a bụ ndị ụlọ ọrụ na-ahụkarị. Agbanyeghị, ị ga-eburu n’uche na ịre ahịa bụ sayensị nke na-agbanwe wee gbanwee ọtụtụ afọ, yabụ atụmatụ ọhụụ na-apụta mgbe niile ma echefuru ndị ọzọ. You maara ụdị ndị ọzọ dị mkpa ahịa azum? Ka anyị mara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Typesdị ahia dị iche iche nke 7